Bahamas-Yakavakirwa Coral Vita Inokunda Yakakurumbira Prince William's Earthshot Prize
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Bahamas Kuputsa Nhau » Bahamas-Yakavakirwa Coral Vita Inokunda Yakakurumbira Prince William's Earthshot Prize
Bahamas Kuputsa Nhau • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Caribbean • tsika nemagariro • Hurumende Nhau • Hospitality Industry • nhau • Kutarisirwa • Sustainability News • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau
Bahamas Ministry of Tourism, Investment & Aviation inokorokotedza Grand-Bahama based Enterprise Coral Vita kuhwina mubairo wakakurumbira wePrince William's Miriyoni-pondo Earthshot muAlexandra Palace, muLondon Svondo rapfuura. Iyo Earthshot Prize ye £ 1 miriyoni inopihwa neRoyal Foundation kune vashanu vanokunda gore rega rega nekuda kwavo kwekugadzirisa mhinduro kumatambudziko ezvakatipoteredza. Mibairo inopihwa muzvikamu zvishanu: "Dzivirira uye Dzorera Zvakasikwa," "Raramisa Nyanza Dzedu," "Chenesa Mhepo Yedu," "Vaka Nyika Isina Tsvina" uye "Gadzirisa Mamiriro Ekunze." Pakati peVakakunda mubairo wekutanga vashanu, timu yeCoral Vita yakapihwa mubairo wemamiriyoni gumi emadhora muchikamu che "Regedzera Nyanza Dzedu".
Sainzi chirongwa chakatangira pachitsuwa cheGrand Bahama chakagashira kuzivikanwa kwepasirese nekuda kwekukanganisa kwadzo kugadzirisa kudziya kwepasirese pamakungwa epasi.
Coral Vita inokwanisa kukura makorari anokwana kusvika makumi mashanu nekukurumidza kupfuura zvainokura mune zvakasikwa, uku ichisimudzira kutsiga pakurwisa acidifying uye kudziyisa makungwa.
Iyo nzvimbo inopetwa kaviri senzvimbo yekudzidzisa yegungwa uye yakawana mukurumbira seyekushanya kwevashanyi.
Nekugamuchira nhau dzePeopleshot Prize yakapihwa Coral Vita, Director General vebazi rezveKushanya, Investment & Aviation Joy Jibrilu akati, "Senyika, zvinotipa kuzvikudza kukuru kuti chirongwa chesainzi chiri pachitsuwa cheGrand Bahama chine yakagamuchirwa pasi rose nekuda kwekukanganisa kwayo migumisiro yekudziya kwepasirese mumakungwa epasi. ”
Muna 2018, Sam Teicher naGator Halpern, vavaki veCoral Vita, vakavaka purazi rekorari muGrand Bahama kurwisa shanduko yemamiriro ekunze. muThe Bahamas. Iyo nzvimbo inopetwa kaviri senzvimbo yekudzidzisa yegungwa uye yakawana mukurumbira seyekushanya kwevashanyi. Rimwe gore mushure mekutanga nzvimbo iyi, Hurricane Dorian yakaparadza chitsuwa cheGrand Bahama, icho chakasimbisa kutsunga kwekambani kuponesa matombo edu emakorari. Ichishandisa nzira dzekubudirira, Coral Vita inokwanisa kukura makorari kusvika kakapetwa makumi mashanu nekukurumidza kupfuura zvainokura mune zvakasikwa, uku ichisimudzira kutsiga pakurwisa acidifying uye kudziyisa makungwa. Idzi nzira dzekubudirira kwesainzi dzakaita kuti Coral Vita ave mukwikwidzi akakwana wePasi reMubairo.
Iyo Royal Foundation yeDuke neDuchess yeCambridge Earthshot Prize yakagadziriswa muna 2021. Chinangwa chemubairo ndechekusimudzira shanduko uye kubatsira kugadzirisa pasi mumakore gumi anotevera.
Gore rega rega, kwemakore gumi anotevera, mibairo mishanu yemiriyoni pondo imwe neimwe ichapihwa kune vanofarira zvakatipoteredza, netarisiro yekupa mhinduro makumi mashanu kumatambudziko makuru epasirese pasi pano na50. Vanopfuura mazana manomwe emamina kubva kumatunhu ese epasi akaongororwa iyo yepamusoro mbiri mubairo. Paive nevatatu vakapedzisa mune yega yega yezvikamu zvishanu. Vese gumi nevashanu vanopedzisa vanozotsigirwa neThe Earthshot Prize Global Alliance, netiweki yehunyanzvi, maNGOs, pamwe nemabhizimusi emakambani akazvimirira pasirese vanozobatsira kukwirisa mhinduro dzavo.
Kuti uwane rumwe ruzivo nezve Earthshot tinya pano.